IPhone Yangu Yakagwamba! Zvaunofanira Kuita Kana Yako IPhone Ichando. - Iphone
vakadzi vasingabereki mubible
nei yangu Apple wachi bhatiri kufa iri nekukurumidza
iphone 5 batanidza kune wifi
IPhone Yangu Yakagwamba! Zvaunofanira Kuita Kana Yako IPhone Ichando.
IPhone yako yakagwamba uye hauzive zvekuita. Iwe unodzvanya bhatani repamba, iro Simba bhatani, uye swipe nemunwe wako, asi hapana chinoitika. Ichi chinyorwa hachisi chekungoita sei kuti undezeze yako iPhone kamwe: Zviri nezve maitiro ekuziva chii chakakonzera kuti iPhone yako iome munzvimbo yekutanga uye nzira yekudzivirira yako iPhone kubva pakuomeswa nechando zvakare mune ramangwana.
SeApple Tech, Ndinogona Kutaura Nevimbiso Kuti Chero Zvimwe Zvinyorwa zvandakaona Zviri Zvakashata.
Zvimwe zvinyorwa zvandakaona, zvinosanganisira Apple pachayo chinyorwa chekutsigira, tsanangura a kugadzirisa kamwe chete ye chikonzero chimwe chete iyo iPhones inotonhora, asi iripo zvakawanda zvinhu zvinogona kukonzera chando iPhone. Zvimwe zvinyorwa hazvitaure nezve kugadzirisa dambudziko, uye iri idambudziko risingapfuure roga.
Sei Yangu IPhone Yakagwamba?
Yako iPhone yakagwamba nechando nekuda kwesoftware kana dambudziko rehardware, asi yakawanda yenguva, dambudziko rakakomba re software ndiro rinokonzera kuti iPhones dziome. Nekudaro, kana yako iPhone ichiri kurira asi iyo skrini iri nhema, iwe uchawana mhinduro mune yangu chinyorwa inonzi Yangu iPhone Screen Iri Dema! Kana chando, verenga mberi.
1. Vhenekera Yako iPhone
Kazhinji, unogona kufungidzira iyo iPhone nekuita yakaoma reset, uye izvi zvinosvika sekumwe zvinyorwa zvinowanzoenda. Kugadziridza kwakaomarara ibhendi-yekubatsira, kwete mhinduro. Kana iPhone ikaoma nechando nekuda kwenyaya yakadzama sedambudziko rehardware, reset rakaomarara rinogona kusashanda zvachose. Izvo zviri kutaurwa, kana tichizogadzirisa yako yakaomeswa iPhone, yakaoma reset chinhu chekutanga chatichaita.
Maitiro Ekuita Yakaomarara Reset Pane Yako iPhone
Bata Bhatani repamba (bhatani rakatenderera pazasi pechiratidziro) uye Kurara / Wake Bhatani (iro bhatani remagetsi) pamwechete kwemaminitsi gumi. Kana iwe uine iyo iPhone 7 kana 7 Plus, iwe unofanirwa kuomesa zvakaoma yako iPhone nekudzvanya uye kubata iro bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi bhatani pamwe chete. Unogona kurega mabhatani ese ari maviri mushure mekunge Apple logo yaonekwa pachiratidziri.
Kana iwe uine iPhone 8 kana nyowani, iwe unozomisazve kuiseta nekudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, nekudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, nekudzvanya uye kubata bato repadivi kusvikira iyo skrini iende nhema uye iyo Apple logo inoonekwa .
Iwe unofanirwa kukwanisa kushandisa yako iPhone mushure mekunge yatendeuka, asi Ini ndinokurudzira zvikuru kuti uenderere mberi kuverenga kuti uone kuti nei yako iPhone yaoma nechando pakutanga, saka hazviitike futi. Kana reset rakaoma risingashande, kana kana yako iPhone ikasununguka pakarepo yobva yatanga zvekare, ruka kuenda padanho rechina.
iPhones hazviwanzo kuenda kubva pakushanda kwakakwana kuita chando chose. Kana yako iPhone iine kunonoka , kuchipisa , kana bhatiri rayo rave kufa nekukurumidza kwazvo , zvimwe zvinyorwa zvangu zvinogona kukubatsira kugadzirisa izvo zvinhu, izvo zvinogona kugadzirisa izvi.
Kana yako iPhone ikadzorerwazve padanho rekupedzisira, ndinokukurudzira kuti utore mukana uno kutsigira yako iPhone. Kana iPhone ikagwamba, haisi yekumhanyisa bump - iri hombe software kana dambudziko rehardware. Iyo inogara iri pfungwa yakanaka kuve ne backup, kunyanya kana iwe usina chokwadi kuti yako iPhone ichaoma zvakare muawa kana zuva.
Dzorera Up Yako iPhone KuICloud
Usati watanga, ita shuwa kuti yako iPhone yakabatana neWi-Fi. Wobva wavhura Zvirongwa uye tinya pazita rako kumusoro kwechiso. Tinya iCloud -> iCloud negadziriro yeparutivi uye ita shuwa kuti switch irimo. Pakupedzisira, tapira Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa chinyorwa chedu chinotsanangura sei kugadzirisa iCloud negadziriro yeparutivi saka hauna kuzombopererwa neICloud nzvimbo yekuchengetera zvakare.
Dzorera Kumusoro Wako iPhone Ku iTunes
Kana iwe uine PC kana Mac inomhanya macOS 10.14 kana kupfuura, iwe unozotsigira yako iPhone uchishandisa iTunes. Unganidza yako iPhone kuPC yako kana Mac uchishandisa Mheni tambo. Vhura iTunes wobva wadzvanya pane icon ye iPhone padyo nekona yekumusoro-kuruboshwe kona yekushandisa.
Dzvanya denderedzwa padyo ne Iyi Computer uye tarisa bhokisi riri pedyo ne Encrypt Yemunharaunda Backup . Pakupedzisira, tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
sei usingazivi iphone yangu kubatanidza kune yangu wifi
Dzorera Up Yako iPhone Kuti Uwane
Apo Apple yakaburitsa macOS 10.15, iTunes yakatsiviwa neMumhanzi, nepo iPhone syncing uye manejimendi yakaendeswa kune Tsvaga. Kana iwe uine Mac inomhanya macOS Catalina 10.15, iwe unozotsigira yako iPhone uchishandisa Finder.
Unganidza yako iPhone kune Mac yako uchishandisa Mheni tambo. Vhura Tsvaga uye tinya pane yako iPhone pasi penzvimbo. Dzvanya denderedzwa padyo ne Dzorera rese data pane yako iPhone kune iyi Mac , uye tarisa bhokisi riri pedyo ne Encrypt Yemunharaunda Backup - unogona kutumirwa kuisa yako Mac password. Pakupedzisira, tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
3. Edza Kusarudza Ndeipi App Yakakonzera Dambudziko
Chimwe chinhu chinofanirwa kukanganisika neapp kana sevhisi kune yako iPhone kuti ishande. Sevhisi chirongwa chinomhanya kumashure kwe iPhone yako kuti zvinhu zvifambe mushe. Semuyenzaniso, CoreTime ndiyo sevhisi inochengeta zuva uye nguva pane yako iPhone. Heano mimwe mibvunzo kuti ikubatsire kugadzirisa matambudziko:
Wanga uri kushandisa Anwendung apo yako iPhone chando?
Ko yako iPhone inotonhora nguva dzese paunoshandisa iyo app?
Wakangobva kuisa app nyowani here?
Wakachinja marongero pane yako iPhone?
Mhinduro yacho iri pachena kana yako iPhone ikatanga kuoma nechando mushure mekuburitsa app nyowani kubva kuApp Store: Delete iyo app. Asi usati waita, tarisa iyo App Store kuti uone kana paine zviripo. Zvinogona kuti Anwendung haasi kushanda nekuti chikare.
Vhura iyo App Store app uye tinya pane Akaundi icon mune yepamusoro kurudyi kona yekona. Bhura pasi pasi kuti uwane runyorwa rwemaapps ako aine zviripo zviripo.
Tinya Kwidziridza padyo nechero maapplication aunoda kugadzirisa. Iwe unogona zvakare kugadzirisa zvese zvako zveapps kamwechete nekukanya Gadziridza Zvese pamusoro pechinyorwa.
Delete Iyo Isingashande App
Tsvaga iyo app yaunoda kudzima uye tinya uye batisisa pane yayo icon. Tinya Bvisa App apo menyu inoonekwa pachiratidziri. Wobva wadzvanya Bvisa -> Delete App . Chekupedzisira, tinya Delete kuti usimbise sarudzo yako uye uninstall iyo app kubva ku iPhone yedu.
yangu iphone maapplication haana kuzarura
Ko kana yako iPhone ikasununguka pese paunovhura iyo Mail app, Safari, kana imwe yakavakirwa-mukati app yausingakwanise kudzima?
Kana zvirizvo, enda Zvirongwa -> Iyo App uye ona kana iwe uchigona kuwana chero matambudziko nemaitiro akagadzwa. Semuenzaniso, kana Tsamba iri kukonzera yako iPhone kuti ishande, ita shuwa kuti mazita emushandisi nemapassword akaiswa nemazvo maakaundi eMail. Kana Safari iri kutonhora, enda ku Zvirongwa -> Safari uye sarudza Bvisa Dzose Nhoroondo uye Webhusaiti Dhata. Kugadzirisa dambudziko iri kunowanzoda rimwe basa reutikitivha.
Tarisa Diagnostics & Usage
Nguva yakawanda, haina kunyatsooneka sei yako iPhone iri kutonhora. Enda ku Zvirongwa -> Zvakavanzika -> Analytics -> Analytics Dhata uye iwe uchaona runyorwa rwemaapplication uye masevhisi, mamwe acho iwe aunozoziva, mamwe acho ausingazo.
Kungoti nekuti chimwe chinhu chakanyorwa pano hazvireve kuti pane dambudziko neiyo app kana sevhisi. Nekudaro, kana iwe ukaona chimwe chinhu chakanyorwa kakawanda, uye kunyanya kana iwe ukaona chero maapplication akanyorwa padhuze ne LatestCrash , panogona kunge paine dambudziko neiyo app kana sevhisi iri kukonzeresa kuti iPhone yako isaoma.
Dzorerazve Zvese Zvirongwa zvinogona kubatsira kana iwe uchinge usina chokwadi kuti ndechipi app chiri kukonzera kuti iPhone yako isaoma. Dzorerazve Zvese Zvirongwa zvinogadzirisazve yako iPhone zvigadziriso kune yavo fekitori zvisizvo, asi haibvise chero data.
Iwe uchafanirwa kupindazve yako Wi-Fi password uye kugadzirisa iyo Zvirongwa app zvakare, asi Dzorerazve Zvese Zvirongwa unokwanisa gadzira chando iPhone, uye rakanyanya kushoma basa pane kudzima uye kudzorera yako iPhone kubva backup. Kuti udzorezve yako iPhone kune fekitori default zvigadziriso, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Seta Zvese Zvirongwa .
4. Matanho Akasimba: Gadzirisa Iyo Yakaoma Frozen iPhone Dambudziko Kune Rakanaka
Kana reset rakaoma risingashande, kana kana iwe waedza ese ekugadzirisa esoftware andinotsanangudza pamusoro uye yako iPhone ichiri yakaomeswa, tinofanirwa kurova iro rakaomeswa iPhone dambudziko ne Iyo Huru Nyundo , uye zvinoreva kuti tinoda DFU kudzorera iPhone wako .
Unganidza yako iPhone kune komputa yako uye vhura iTunes. Kana iTunes isingazive yako iPhone, edza kuita yakaoma reset apo yako iPhone yakabatana necomputer yako. Iyi sarudzo yekupedzisira sarudzo, nekuti kudzoreredza yako iPhone zvinoita zvinomuomera kuikanganwa mashoko ako ose kubva iPhone wako. Kana uine negadziriro yeparutivi musi iCloud kana iTunes, unofanira kukwanisa kudzorera mashoko ako mushure iPhone wako reboots. Ukasadaro, panogona kunge pasina chaungaite panguva ino kuchengetedza data rako.
5. Gadzirisa Dambudziko reHardware
Kana yako iPhone isingaratidze mu iTunes kana iyo yekudzoreredza maitiro ichitadza, dambudziko rehardware rinogona kunge richikonzera kuti iPhone yako isaome. Kunyangwe hushoma hwemvura inogona kukanganisa bhatiri re iPhone yako, processor, nezvimwe zvinhu zvemukati. Iyo iPhone haidi kudzima kana izvo zvikaitika: Dzimwe nguva, zvese zvinongomira.
Apple ekugadzirisa masevhisi ari emhando yepamusoro, asi anogona kudhura. Kana iwe uchida kuenda kuburikidza neApple, fonera kumberi uye gadzirira musangano neGenius Bar, kana kushanya Tsigiro reApple rewebhu kutanga tsamba-mukugadzirisa.
Isu takagadzirisa chikonzero nei yako iPhone yakagwamba nechando uye iwe unoziva zvekuita kana yako iPhone ikambotonhora zvakare. Ndinovimba, iwe waona kuti ndeipi app kana sevhisi yaive ichikonzera dambudziko uye une chivimbo kuti yakagadziriswa kune zvakanaka. Ndiri kufarira kunzwa kuti chii chaizvo chakakonzera kuti iPhone yako ifrize uye nemabatiro awakagadzirisa yako iPhone muchikamu chemashoko pazasi. Yako ruzivo ichabatsira vamwe kugadzirisa maPhones avo futi.